Naato ny tetikasa iray nomena alàlana hanao fitrandrahana ao amin’ilay Ala Ebo manankarena biolôjika ao Kamerona, saingy mbola marefo ihany ilay faritra · Global Voices teny Malagasy
Toeram-ponenan'ireo babakoto tandindonim-paharinganana ilay faritra
Nandika (fr) i Matthieu Daubin
Voadika ny 07 Jona 2021 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, українська, Nederlands, English
Ny tontolo tazana ery amin'ny tampon'ny ala EBO, Janoary 2021. Sary an'i Ekonde Daniel, fampiasàna nahazoana alàlana.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, dia mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ao anaty lahatsoratra.]
Faritra iray manana karazana biôlôjika marobe ny ala EBO ao Kamerona, mampiantrano zavamaniry maro sy ireo babakoto efa tandindonim-paharingànana, ao anatin'izany ireo hany sisa tavela amin'ireo rajako fantatra eto an-tany fa mahay mamaofy voanjo sy misikotra vitsikazo amina fitaovana.
Tamin'ny Jolay 2020, nandray fanapahankevitra ny governemanta kameroney ny hanao ny ala Ebo, izay mivelatra amina velarana 141.706 hektara, ho isan'ny Forest Management Unit (FMU) – Ampahan'Ala Tantanina – ary nankatoa faritra iray ho fitrandrahana aty ala tao amin'io faritra io. Herinandro maromaro taty aoriana, ny Aogositra 2020, zavatra nahafaly indrindra ireo mpiaro tontolo iainana izay nanohitra io tetikasa io [pdf], nofoanan'ny governemanta ilay fanapahankevitra, tamin'ny namoahany didim-pitondràna iray milaza fa naato ilay fanomezandàlana fitrandrahana ala.
Nahafaly mponina marobe tao an-toerana ihany koa io fanapahankevitra io.
« Raha manapaka hevitra ry zareo [governemanta] ny haka ny ala nefa tsy mifampiresaka aminay, dia hankany an'ala izahay ary hivadika ho mpikomy [fr] », hoy ny lehibe Dekath Moise Nguile tamiko. « Ho ataonay izay miseho any Bamenda », hoy izy nanampy, miresaka momba ilay tanàna iray any amin'ny faritra mikorontana ao avaratra-andrefan'i Kamerona.
« Milevina ao ny ray aman-dreninay! »
Nanaraka an'i Nguile, mpitarika iray ao an-toerana, aho tany anatin'ny ala Ebo, làlana naharitra ora enina teo ho eo miala an'i Douala, renivohitra ara-toekarena ao Kamerona.
« Ao, manana hazo ianao, babakoto sy rajako – milevina any ny ray aman-dreninay. Ny ady no nanosika anay ho aty amin'ity toerana ity », hoy ny nambaran'i Nguile momba ilay faritra fonenana ipetrahan'ireo mponina am-bohitra ary ananany trano iray rahateo. « Manana ny toerana masina ho anay izahay any, ka rehefa misy ny olana dia mandeha any izahay mivavaka. »
Tamin'ny fahatongavany tao Douala, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, tafahaona tamina vehivavy iray avy amin'ny iray amin'ireo foko tao an-tanàna i Dekath Nguile. Sary an'i Ekonde Daniel, fampiasàna nahazoana alàlana.
Niara-dia tamin'i Nguile aho nandritra ny iray amin'ireo fitsidihana marobe ataony tsy tapaka any an'ala, toerana misy ihany koa ny vohitry ny razambeny, iray amin'ireo vondrom-piarahamonina miisa 40 ao amin'ny faritra.
Tamin'ny fahatongavanay atao amin'ny vondrom-piarahamonina iray, nihaona tamin'ny mpitarika Emmanuel Belema izahay, mpitarika vondrom-piarahamonina, manaha voana kakaô eo anoloan'ny tranony teo amoron'ny ala Ebo. Tao amin'ny fampielezampeo, fifandraisany amin'ny tontolo ivelany, no ren'i Belema ilay fanapahankevitra tamin'ny Jolay 2020 hoe hanokafana ilay ala ho amin'ny fitrandrahana.
Emmanuel Belema, lehibe mpitarika vondrom-piarahamonina, manaha kakaô eo anoloan'ny tranony. Sary an'i Ekonde Daniel, fampiasàna nahazoana alàlana taminy.
« Miandry ny fitsidihan'ny governemanta izahay. Alohan'ny hitrandrahana ny ala, tokony nilaza taminay izay homeny anay ry zareo. Raha tsy misy na inona na inona hanampiana anay, dia tsy hainay izay ho valiny asetrinay azy ireo», hoy i Belema tamiko.
Vinavinan'i Belema ny hoe ireo vato nasondrontry ny tany avy ao amin'ny vohitra misy azy, ary mipetraka amin'izao fotoana izao « any amin'ireo tanàndehibe ao Douala sy Yaoundé » no tompon-kevitra tamin'ny fifanarahana niarahana tamin'ny governemanta mba hikapàna ny ala ho an'ny sehatry ny indostria. « Nefa izahay no mpiambina ity ala ity », hoy izy, talohan'ny nitsaharany kely. « Mampiahiahy anay izany. Tsy hahafaly anay raha izany no mitranga. »
Na fitrandrahana volamena io na fikapàna ala, efa hatry ny ela ireo orinasa nahazo fanomezandàlana no nisedra fanoherana avy amin'ireo mponina any anatin'ny faritra nahazoan-dry zareo alàlana hotrandrahana. Ny antony amin'ny ampahany dia noho ireo fampanantenana fanajariana maharitra tsy misy voatazona mihitsy. Fanampin'izany koa ireo fiampangàna fakàna tany sy ny fandotoana ataon'ilay vondrona mpandraharaha frantsay Bolloré any amin'ny faritra amorontsiraka ao Kamerona, ary ireo fifandonana tsy tapaka misy eo amin'ireo shinoa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany sy ireo mponina ao amin'ny faritra atsinanana, manankarena amin'ny volamena.
Toa an'i Nguile, tsy ny vohitra nahaterahany akory ilay faritra ipetrahan'i Belema. Nipetraka ao amin'ity faritra ity ry zareo, izay misy vondrom-piarahamonina iray ahitàna olona 200 eo ho eo, noho ny ady anaty akata nisy 50 taona lasa izay.
Ny tarik'i Nguile koa dia isan'ireo nizaka ny mangidy tamin'ny fanesorana an-tery tany amin'ny taona 1960 tany ho any, rehefa niady tamin'ny rantsana mpihoko avy amin'ny Union des populations du Cameroun (UPC) ny governemanta tao Kamerona. Satria niafina tany anaty kirihitra ireo mpikambana avy amin'ny UPC mba hahafahany manatontosa tsara ireo hetsika tselatra nataon-dry zareo, dia nasain'ny Fanjakàna niala ireo mponina tao amin'ilay faritra.
Tamin'ny Janoary 2021, mihoatra ny olona 200 no monina eny amoron'ny alal Ebo. Sary an'i Ekonde Daniel, fampiasàna nahazoana alàlana.
Tamin'ny Febroary, niresaka an-telefaona izaho sy ny Dr Ekwoge Abwe, mpikaroka ao amin'ny Fandaharanasa misahana an'i Afrika Afovoany ho an'ny Ala Ebo, ao anatin'ny valam-biby ao San Diego, ary izy no nanazava tamiko fa « Ebo dia raisina ho toy ny velaran'ala midadasika ao anatin'ny faritra manana fahamaroam-piainana avo dia avo ao amin'ny hoalan'i Ginea ».
Nanomboka ny 2002 i Abwe no miasa ao amin'ilay ala. Tamin'ny 2005, ny andiany iray nisy azy, nahitàna olona 13 hafa mpikaroka, nahita tao andiana rajako marobe an'i Kamerona sy Nizerià. Rajako voasokajy ho « ireo tena tandindonin-doza, zara raha misy 3.500 hatramin'ny 9.000 no sisa miaina ny fiainana anaty ala ».
Nambaran'i Abwe tamiko fa misy babakoto manodidina ny 1.000 eo ao Ebo, izany hoe 1/9 amin'ny isan'ireo hita manerantany. Fa ny tena mampiavaka an'ireo babakoto ao Ebo, hoy ny fanamarihan'ilay mpikaroka,dia ny zavamisy hoe « ireo no hany babakoto mampiasa fitaovana hamakiany voa sy rehefa misikotra vitsikazo ».
« Manao ny iray na ny iray amin'ireo ny andiany hafa, saingy izy roa dia samy ampiharin'ireo ao Ebo avokoa, mahatonga ilay ala ho faritra iray tena faran'izay miavaka», hoy i Abwe, tamin'ny fanamarihana ihany koa fa hatramin'ny 2005, 28 no karazan-javamaniry vaovao hita fa « tsy misy raha tsy ao amin'ilay ala irery ».
Na eo aza ny fananany zavamananaina maro sy ny hoe mitazona entona karbôna milanja 35 tapitrisa taonina ilay faritra, mbola misababaka ihany ny governemanta kameroney momba ny fanondroana azy ho toy ny valanjavaboarim-pirenena, fangatahana iray nataon'ireo mpikatroka mpiaro tontolo iainana hatramin'ny 2005..
« Vitsivitsy ihany amin'ireo antony narosonay teo anoloan'ny governemanta ireo », hoy i Abwe tamiko. « Ny fitadiavana fomba hafa hampidirana vola sy amin'ny fomba maharitra ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana no tokony hosaintsainintsika fa tsy ny hitrandrahana io faritra io. »
Kanefa, ny lanjan'ny famokarana hazo ao anatin'ny fandraharahana ara-toekarena kameroney sy ny fitomboan'ny fampiasambola amin'io sehatra io, izay tany aloha tany nobodoin'ireo Eorôpeàna, saingy ankehitriny dia fehezin'ireo orinasa shinoa [pdf], dia tsy afaka iantohana velively ny tsy hahatohina an'i Ebo.
Tamin'ny Jolay 2020, tsy lavitra ny fotoana nanaovana ny fanambaràna voalohany, nilaza ny ministera kameroney misahana ny ala sy ny fiainan'ny bibidia fa efa nikajy mihoatra ny avo roa heny amin'ny 12% faritra rakotra ala takian'ny Firenena Mikambana ary tsy ny hazo rehetra ao amin'ny ala Ebo akory no hotapahana. Nandeha tany amin'ny ministera kameroney misahana ny ala sy ny fiainan'ny bibidia aho ny 25 Febroary mba hamantatra raha toa ka misy vintana ihany ny hisokafan'ilay ala amin'ny fitrandrahana indostrialy aoriana ao. Tsy nahita olona aho na iray aza vonona ny hanao fanambaràna ofisialy.
Hatramin'ny nampiatoan'ny governemanta ilay fikapàna ala, tsy mbola nisy hatreto ny fanambaràna ofisialy nataony. « Ireny olona ireny, izay azoko antsoina amin'ny hoe vorona mpihinana faty, dia mitady mandrakariva ny hanafoanana ilay fampiatoana », hoy i Abwe.
Mandra-pilaza an'i Ebo ho faritra arovana, dia mitoetra mandrakariva ho lasibatra iray azo tratrarina io ala io ho an'ireo izay mikatsaka ny hitrandraka ny hareny ao aminy.
Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Boris Karloff Batata.
Famatsibmola avy amin'ny CIVICUS no nnatontosana ity fanadihadiana ity, fandrindràna nataon'ny Oniversiten'i Witwatersrand ao Johannesburg tamin'ny alàlan'ny African Investigative Journalism Conference (AIJC).